Filtrer les éléments par date : dimanche, 06 décembre 2020
dimanche, 06 décembre 2020 21:13
Ny Ariary ananana fahefana tsy ferana tsy hiovaova
Pilo kely : Ny Ariary ananana fahefana tsy ferana tsy hiovaova, fa ny vidim-bary tsy voafehy no ferana
dimanche, 06 décembre 2020 19:36
Avaratsena - Betafo : Taolam-paty iray gony hita tao anaty lobolobo
Taolan-dava miisa 125 natao tao anaty gony lehibe iray no hitan'ny Fokonolona narian'olon-tsy fantatra tao anaty lobolobo, tao Kelimetsaka Fokontany Avaratsena, Kaominina sy Distrikan'i Betafo ny tolakandron’ny 05 desambra 2020.
Taorian’ny fampandrenesana voarainy dia niara-nidina ifotony nizaha ireo taolana ny Zandary, ny mpitondra ary ny mpiasan'ny fahasalamana.
Notazomina anaty tranom-paty moa izany taolana izany mandra-pahatongan'ny olona mety ho tompony.
Hatreto anefa, tao anatin'ny fari-piadidian'ny Zandarimaria ao Mandoto dia tsy naharay tranga vaky fasana nandritra ny taona 2020.
Ny Zandary ao Betafo no manao ny fanadihadiana.
dimanche, 06 décembre 2020 19:35
Tontolo iainana : 75 000 hekitara ny velarantany hovolena hazo isan-taona
Hiakatra 75 000 hekitara ny velarantany hovolena hazo isan-taona eto Madagasikara. Ireo hazo mamaly ny filan'ny mponina isam-paritra, manome angovo, mamerina ny toetra sy ny tsiron'ny tany, ary hazo fihinam-boa no hatao laharampahamehana.
Ahitana taratra izany ny any amin'ny faritra Matsiatra Ambony, izay manana tanin-janakazo telo, ka anisany ny ao Sahambavy izay kendrena hamokatra hatramin'ny zana-kazo 75 000 isa.
Misy tanin-janakazo ihany koa ao Besorohitra izay tantanan'ny miaramila, manana tanjona hamokatra zanakazo 150 000 isa ary ny ao Iboka.
Tanjona apetraka ny hahazoana zanakazo 300 000 ho an'ny faritra Matsiatra Ambony iray manontolo.
Nambaran'i Minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Rahariniriana Baomiavotse Vahinala fa paikady sy fanavaozana apetraky ankehitriny ny hamboly ireo hazo ilain'ny isam-paritra, hazo manome angovo, hazo fihinamboa ary indrindra ireo hazo afaka mamerina sy manarina ny toetra sy ny tsiron'ny tany efa simba.
dimanche, 06 décembre 2020 11:49
Nosy Be : Sarona ny volamena 3kg600 saika haondrana an-tsokosoko any Dubai
Saron’ny Polisy misahana ny sisintany miasa ao amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fascene - Nosy Be nandritra ny fisavana entan’ny mpandeha handray sidina ny sabotsy 05 desambra ny volamena milanja 3kg600.
Nafenina tao anatin’ny vatoaratry (batterie) ny solosaina miisa telo ireo volamena ary kasaina hoentina any Dubai.
Teratany vahiny miisa enina, miampy teratany malagasy iray mpandika teny, no voarohirohy amin’ireto volamena ireto, ary notanana anaovana famotorana amin’izao.
dimanche, 06 décembre 2020 11:37
Fivoriana maika teny Mahazoarivo : Tsy tokony hihoatra ny 550 Ariary ny vidin’ny vary iray kapoaka
Nampiantso fivoriana maika teny Mahazoarivo ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, ny zoma 04 desambra, hamantarana ny olana misy mba hahafahana mitondra vahaolana manoloana ny fiakaran’ny vidim-bary eny an-tsena, izay hita fa misy fiantraikany amin’ny fahefa-mividin’ny vahoaka Malagasy, indrindra ao anatin’izao fotoana iarenana amin’ny niatrehana ny valanaretina Covid-19 izao.
Niara-nidinika tamin’izany ny minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana ; ny minisitry ny Fambolena, Fiompiana ary Jono ; ny Governoran’ny Banky Foiben’i Madagasikara ; ny solontenan’ireo mpanafatra sy mpamokatra vary ; ary ny solontenan’ireo mpivarotra vary ambongadiny.
Nivoitra nandritra ity fivoriana ity, fa tsy tokony hihoatra ny 550 Ariary ny vidin’ny vary iray kapoaka, eny an-tsena, ary fantatra fa maherin’ny 100 000 taonina ny vary ho tonga eto an-toerana alohan’ny faran’ity volana desambra ity ka hanalefaka ny vidim-bary izany, manomboka ny sabotsy 05 desambra.
Nanambara ny Praiminisitra fa tsy azo ekena ny fisian’ ireo izay minia manafina vary sy manararaotra mampiakatra ny vidiny, satria ny hanalefaka ny tsenam-bary no tanjona.
dimanche, 06 décembre 2020 11:24
Tolotanana ho an’ny any Atsimo : Navitrika ny tanora, tonga maro ny ray aman-dreny
Tontosa tetsy amin’ny Magro Behoririka ny sabotsy 5 desambra 2020 ny hetsika Tolotanana ho an’ny any Atsimo, nandraisana izay fitia tsy mba hetra ho fanohanana ireo mpiray tanindrazana ianjadian’ny kere any atsimo.
Navitrika ny tanora, tonga maro ny ray aman-dreny. Nandray anjara hatramin’ny EmmoReg tonga nanara-maso ny filaminana teny an-toerana, sy nampanaja ny tsy hisian’ny fitangoronana mihoatra ny fetr’isa ho fitandremana ara-pahasalamana.
Tonga teny an-toerana nitondra ny anjara birikiny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. « Fisantarana ihany ity fa manetsabe mbola ho avy », hoy izy naneho hafaliany fa « afaka nitondra ny fiaraha-mientana ho an'ireo havantsika any atsimo ».
Nisy hetsika toy izao koa tao amin’ny Tiko Ambodisoanambo Toamasina, ary hitohy amin’ny 9 desambra 2020.
dimanche, 06 décembre 2020 11:21
Mahajanga : Mitaraina ireo mpandray vola avy amin’ny tetibolan’ny faritany
Sasa-miandry ! Mitaraina ho tsy mbola nandray karama volana novambra 2020 ireo mpampianatra, mpiasan'ny fahasalamana mandray vola avy ami’ny tetibolan’ny faritany.
Tato anatin’ny telo volana farany no misy fahatarana toy izao hatrany, hoy ny fanamarihan’ireo mpisitraka izany.
dimanche, 06 décembre 2020 11:17
Covid-19 : Mbola eto Madagasikara ary mamono
Namono olona miisa 4 ny Covid-19 tao anatin’ny tapabolana teo anelanelan’ny 19 novambra ka hatramin'ny 03 desambra 2020, raha ny teto Madagasikara.
Olona 132 no voatily fa mitondra ny tsimok'aretina tamin'ireo fitiliana niisa 1 738 natao.
Olona 270 no sitrana soamatsara, saingy mbola misy 291 no mbola manaraka fitsaboana.
dimanche, 06 décembre 2020 11:16
Tsy fahandriam-pahalemana : Mihorohoro ny mponina manodidina eny amin'ny faritra Manarintsoa afovoany na koa hoe "Vorodamba".
Manjaka ny mpanendaka eny amin'iny lalana iny.
Manindron'antsy avy hatrany rehefa mifanehitra aminy, indrindra ireo mody harivariva manodidina ny amin'ny fito eo.
Olona mitondra kitapo matetika no tena lasibatr'ireo mpanao asa ratsy. Raha sendra vehivavy moa dia aholan'izy ireo no sady endahany. Ny manohitra dia voatsatok'antsy avy hatrany.
Mitaraina araka izany ireo mponina. Na dia efa manao izay ho afany aza ny mpitandro ny filaminana dia ilaina ny fifandrombonana samy mpiray monina mba hialana izao asa ratsy mifanesisesy izao hoy ireo mponina eny.
Efa maro ny fitarainana mahakasika ity fanendahana miampy tsindron'antsy ity, fa dia mbola tsy nahitam-bokany hatreto. Miandry ny hisian'ny fahalemana ny mponina amin'izao vanim-potoana sarotra izao.